ESI GBANYỤỌ YANDEX DIRECT NA YANDEX NCHỌGHARỊ - YANDEX - 2019
Esi gbanyụọ Yandex.Direct na Yandex Browser
Azu - ihe kachasị chọọ na ihe niile gbasara Photoshop. Site n'enyemaka nke brushes a na - arụ ọrụ dị ukwuu - site na ihe ndị dị mfe iji na-emekọrịta ihe na masks nchekwa.
Akwụsị ahụ nwere mgbanwe dị oke ngbanwe: nha, nkwanye, ọdịdị na ntụziaka nke mgbanwe mgbanwe, maka ha ị nwekwara ike ịtọ ọnọdụ ngwakọta, opacity na nrụgide. Anyị ga-ekwu banyere ihe ndị a nile na nkuzi taa.
Ngwaọrụ a dị n'otu ebe dịka ndị ọzọ niile - na ngwaọrụ osi ekpe.
Dị ka ngwaọrụ ndị ọzọ, maka brushes, mgbe a na-arụ ọrụ, a na-enyefe oghere ntọala elu. Ọ bụ na a panel na-ahazi njirimara na-ahazi. Nke a bụ:
Size na udi;
Opacity na nsogbu.
Ihe oyiyi ndị ị nwere ike ịhụ na panel ahụ na-eme ihe ndị a:
Mepee oghere maka ịmegharị ụdị ọdịdị ahụ (analog bụ igodo F5);
Akọwa opacity nke ahịhịa site na nrụgide;
Na-eme ka ọnọdụ ikuku ụgbọelu dị;
Na-ekpebi nha nke ahịhịa site na nrụgide.
Mkpọchi ikpeazụ atọ n'ime ndepụta ahụ na-arụ ọrụ naanị na mbadamba eserese, ya bụ, nbalite ha agaghị ebute ihe ọ bụla.
Izu oke na udi
Ogwe ntọala a na-ekpebi nha, ọdịdị na nkwesi olu nke brushes. A na-edozi nha nke ahịhịa ahụ na ihe mmịfe kwekọrọ na ya, ma ọ bụ na bọtịnụ square na keyboard.
A na-edozi nkwesi olu nke ikuku ahụ site na ihe nrịba n'okpuru. Akpụ na-esi ike nke 0% nwere akụkụ kachasị njọ, na ahịhịa nke 100% nwere oke.
A na-ekpebi ọdịdị nke ahịhịa ahụ site na setịpụrụ na window windo nke panel. Anyị ga-ekwu okwu banyere setịpụrụ obere oge.
Ọnọdụ a na-ekpebi ọnọdụ ngwakọta nke ọdịnaya nke ahịhịa na-etinye na ọdịnaya nke oyi akwa a. Ọ bụrụ na nchekwa (ngalaba) enweghị ihe, mgbe ahụ, ihe onwunwe ahụ ga-agbasakwa n'adabere isi. Ọ na-arụ ọrụ dị ka ịgwakọta ụdịdị.
Ihe omumu: Ngwakọta nke na-ejikọta ọnụ na Photoshop
Opacity na nsogbu
Ihe yiri nke oma. Ha na-ekpebi oke nke agba agba a na-etinye na otu ntinye (pịa). A na-ejikarị ya eme ihe "Opacity"dị ka ọnọdụ doro anya na nke zuru ụwa ọnụ.
Mgbe na-arụ ọrụ na masks kpọmkwem "Opacity" na-enye gị ohere ịmepụta nsụgharị dị mfe na translucent ala n'etiti hu, ihe oyiyi na ihe dị iche iche nke palette.
Ihe omumu: Anyị na-arụ ọrụ na masks na Photoshop
Ịdị mma nke ọma
Nke a, a kpọrọ, dịka e kwuru n'elu, site na ịpị akara ngosi ahụ n'elu n'elu interface ahụ, ma ọ bụ site na ịpị F5, na-enye gị ohere ịdị mma-gbanwee ọdịdị nke ahịhịa ahụ. Tụlee ntọala kachasị eji mee ihe.
Mpempe akwụkwọ ntanetị.
Na nkeabụ a, ị nwere ike ịhazi: ọdịdị nku (1), nha (2), ntụziaka bristle ma bipụta udi (ellipse) (3), ike (4), nhazi (akụkụ dị n'etiti nbipụta) (5).
Ụdị nke ụdị.
Ntọala a na-ekpebi ihe ndị na-esonụ: ntụgharị ihu (1), nke kachasị dị elu dayameta (2), ntụziaka bristle angle variation (3), ọdịdị nke ọdịdị (4), nke kachasị ederede (ellipse) (5).
A na-ahazi taabụ a na-agbasasị ihe nbipụta. Ntọala ahụ bụ: gbasaa mpempe akwụkwọ (obosara nke dispersion) (1), ọnụ ọgụgụ nke mpempe akwụkwọ mepụtara n'oge nfe (click) (2), oscillation nke counter - "ịgwakọta" nke mpempe akwụkwọ (3).
Ndị a bụ ntọala ndị bụ isi, ndị ọzọ adịghị eji ya. Enwere ike ịchọta ha n'ime nkuzi ụfọdụ, otu n'ime ha ka enyere n'okpuru.
Ihe omumu: Mepụta ndabere ndabere na Photoshop
A na-akọwacharịrị ọrụ na ndozi na otu n'ime ihe mmụta na saịtị anyị.
Ihe omumu: Anyị na-arụ ọrụ na igbe nke brushes na Photoshop
Na nkuzi a, ị nwere ike ịsị na ọtụtụ nchịkọta mma nwere ike ịchọta na ọha na eze na Ịntanetị. Iji mee nke a, tinye ajụjụ ọchụchọ na nyocha ọchụchọ. "brushes maka photoshop". Tụkwasị na nke a, ị nwere ike ịmepụta setịpụ nke gị maka mma nke ịrụ ọrụ site na njikere ma ọ bụ nchịkọta onwe onye.
Ihe ọmụmụ ọmụmụ ihe Azu mechara. Ihe ọmụma dị na ya sitere na ọdịdị ọdịdị, a na-enwetakwa nkà bara uru n'iji brushes rụọ ọrụ site n'ịmụ ihe ndị ọzọ na Lumpics.ru. Imirikiti nke ọzụzụ ọzụzụ gụnyere ihe atụ nke iji ngwá ọrụ a.